Maitiro ekudzivirira zvikanganiso zvegore rapfuura? | Ehupfumi Zvemari
Gore rakapera rakanga risiri rakaipa kuenzana, sezvakatarisirwa nevamwe vanoongorora zvemari. Chero zvazvingaitika, unenge usisina imwe sarudzo kunze kwekugadzirisa zvikanganiso zvakaitwa muna 2017. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti indekisi inosarudza yeSpanish equities, iyo Ibex 35, Ini ndinopedzisira nekudzokorodza pamusoro pe5%. Nekudaro, zvinoita sekunge gore idzva iri richava rakawandisa zvakanyanya kuoma kuvhura zvinzvimbo mumisika yemari.
Wakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, chimwe chezvinangwa zvako zvekukasira hakusi kudzokorora zvimwe zvezvikanganiso zvakajairika zvakaitwa muchiitwa chekare. Ehezve rinenge risiri basa riri nyore kuzviita. Asi izvo nepadiki kutsungirira iwe uchave unokwanisa kugutsa chako kudiwa. Zvirinani mune chikamu chakanaka chemakanganiso akawandisa awakagadzira mumabasa ako mumusika wemasheya. Zvirokwazvo ivo vanozove zvakanyanya kupfuura iwe zvaunofungidzira kubva pakutanga. Kwete pasina, maeuros mazhinji anoenderana nekugadziriswa kwematambudziko aya mune yega yega mashandiro akaitwa.
Kana iwe uchida kuti gore rino ribereke zvizere mune ese mashandiro auchazoita mumusika wemasheya, uchafanirwa kudzidza kubva mukukanganisa kwekare. Uye ndeipi nzira iri nani pane kuzviita pane kurangarira pawakakanganisa uye kuyedza kupa mhinduro kune uku kukundikana iwe kwawambove nako mune zvakapfuura maitiro Ichave iri yakapusa nzira kuti usazozvidzokorora kubva panguva dzino chaidzo. Zvekuti nenzira iyi, mafambiro ako mumisika yemari anobatsira uye iwe unogona kuwana yakawanda yakawanda mari inowanikwa kubva panguva ino. Ichazokodzera kuedza.
1 Kutanga kukanganisa: kutarisira kumusuwo
2 Chechipiri kukanganisa: kusatarisa zvinoitika
3 Yechitatu kukanganisa: kusasarudza iyo chaiyo kukosha
4 Kanganiso yechina: isa mari yako yese
5 Chechishanu kukanganisa: echo kubva kunopokana masosi
6 Kukanganisa kwechitanhatu: bhegi rinoshandiswa
7 Kukanganisa kwechinomwe: kuva nemakaro kwazvo
8 Kanganiso yechisere: kusaziva kukosha
Kutanga kukanganisa: kutarisira kumusuwo
Ehezve, hapana imwe inodhura chikanganiso kune zvaunofarira pane kusaziva kuti ndeipi nguva yakakodzera yekuvhura zvigaro mune yemari nhumbi. Kusvika padanho rekutsanangudza zano raunofanira kutora kukwidzirisa mashandiro mumisika yemari. Iko chimwe chezvinangwa chikuru chichava pasina mubvunzo chinja mitengo. Zvese kana zvasvika pakutenga nekutengesa. Saka kuti iwe uve nezvimwe zvivakwa zvekuvandudza mhedzisiro yekupedzisira kwezviitiko zvako zvese. Kana iwe ukazviisa mukuita, iwe uchaona kuti mashoma sei mhedzisiro mhedzisiro inokwezva kutarisisa kwako nekuda kwekuita kwavo chaiko kugona.
Iwe haugone kukanganwa chero nguva kuti mazhinji ematambudziko ako mumusika wemasheya anouya kubva kune inopinda inopinda mumisika yemari. Uye semhedzisiro yeichi chiito, iwe uchafanirwa kuisa njodzi yakawanda mukuchengetedza nzvimbo dzako kana uchinyatsoda kuita purofiti ine pundutso zvinobudirira. Zviri nani kuti iwe uite mashandiro mashoma pagore, asi kuti izvi zvakachengeteka. Mune ino pfungwa, iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kune yavo mhando kupfuura yavo yakawanda. Mukupedzisira, ichave imwe yekiyi yekuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda mukati megore remari ra2018.
Chechipiri kukanganisa: kusatarisa zvinoitika
Dzimwe nguva zvinowanzoitika kuti iwe paunopinda mumusika wekutengesa Iwe hautombo cherekedza iyo tsika iyo mutengo wakadzika mukati. Imwe mhosho yakakomba nekuti mashandiro ako anozotadza kutadza muzviito zvakawanda. Kunyangwe rombo rakanaka rinogona kuuya kukubatsira iwe kuti iwe ugone kuwana mashoma mapundutso kuburikidza neiyi nzira yekudyara. Chero zvazvingaitika, iko kukanganisa kune vashoma vashoma uye vepakati varimi vane ruzivo rwekuita. Hazvishamisi kuti ivo vanoziva kuti iyo nhanho iri mukutangisa kutanga mashandiro mune chero musika wezvemari. Kwete chete kubva mumabhegi, asi kunyangwe imwe sarudzo yaunogona kuwana. Semuenzaniso, izvo zvakabatanidzwa nesimbi yakakosha kana mbishi zvigadzirwa, pakati pezvimwe zvakakosha.
Sezvo kukwidziridzwa kuchinyanya kutaurwa, iwe uchave nemukana wakakura kwazvo wekuti iwe unogona kuwana yakawanda mari yakawanda mune yega yega yekuita kwako. Ipo kana iri mune inopesana netsika, ndiko kureva iyo yemhando yepamusoro, chinhu chega chauchazowana ndechekukochekerwa mukukosha. Zvichida kwenguva yakareba kwazvo iyo iwe zvinoita kuti zvisaitikane kunakidzwa nehupfumi kutarisana nezvimwe zvinodikanwa zvakanyanya muhupfumi hwako hwemumba. Zvakadai se, semuenzaniso, kutarisana nemitero yako yemitero, kubhadhara chikoro chevana vadiki pane zvese kana kungogutsa zvishuwo zvevatengi vako.
Yechitatu kukanganisa: kusasarudza iyo chaiyo kukosha
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti rakanakisa kusarudzwa kwemashamba emusika zvinongedzo zvinokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako mumisika yemari. Ehezve, kwavari, iwe hauzove nesarudzo kuti chii chinonzi profile yaunopa semudhara mudiki nepakati. Nekuti zvinoenderana neakakosha hunhu, iwe unenge uine mamwe maitiro pamusoro pevamwe. Sarudzo yekambani iri muchikamu chemagetsi haina kufanana kune mushandisi ane hukasha pane mushandisi ane mwero. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti maitiro avo anozosiyana zvakanyanya.
Zvakare mazwi ekugara anozonyanya kukosha kuita sarudzo. Ichi chiito ndechekuti chinokanganisa nzvimbo dzekuvhura nemaitiro akasiyana zvachose. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuona kuti ndeipi nzira iyo yako yekudyara portfolio iri kutora mukati memwedzi mishoma inotevera. Hazvishamise kuti pamifambiro mipfupi, kuchengetedzeka kunopa kusagadzikana kukuru mumitengo yavo kunenge kuchinyanya kushanda. Saka kuti iwe ugone kutora mukana wemusiyano unosimbiswa pakati pemitengo yawo yepamusoro uye yepasi. Kunyangwe mune imwecheteyo yekutengesa chikamu, uko madaro anosvika anopfuura mashanu% anogona kumisikidzwa pazviitiko zvakawanda.
Kanganiso yechina: isa mari yako yese
Imwe yemhosho dzinowanzoitika mumusika wemasheya inotorwa nekudyara mari yese iwe yauinayo yerudzi urwu rwekushanda. Kukanganisa kwakakomba uko kunogona kukutungamira kune asingadiwe mamiriro ekudzivirira zvaunofarira. Uye izvo zvechokwadi ivo vanokwanisa kukutungamira iwe kuti uite mashandiro akashata kana iyo shanduko mumutengo wayo isiri yakanaka sezvawaitarisira kubva pakutanga. Iwe unogona kunge wakambotambura chiito ichi mumwedzi ichangopfuura uye iwe uchaona kuti mhedzisiro yacho yakakanganisa sei yako kutarisa account account. Anenge anogara achivezwa mu kurasikirwa kwakakomba izvo zvinogona kukanganisa bhajeti yako yemhuri kana zvaunotarisira zvemari.
Chechishanu kukanganisa: echo kubva kunopokana masosi
Iko hakuna kukanganisa kukuru kupfuura kutevera mvumo yezvimwe zvisingadiwe masosi. Mupfungwa iyi, hauzove nesarudzo kunze kwekungwarira mune izvi. Uye kana zvichidikanwa, zvichave zvakakwana zvakakodzera kuti iwe uve unonyanya kusarudza mavari. Kwete pasina, haugone kukanganwa izvo mushure mezvose imari yako yauri kubhejera uye kwete yevamwe. Iwo mhosho dzinopedzisira dzavaita iwo anodhura kwazvo mapepa ekuvimbisa. Iko kunenge kuri nyore kugara mune zvemari uye kumirira iyo nguva yekutora zvinzvimbo mune yakakodzera yemari nhumbi kana chengetedzo.
Kukanganisa kwechitanhatu: bhegi rinoshandiswa
Iwe unofanirwa kufungisisa pane izvo zvaunoda kuwana kubva panguva dzino. Nekuti hazvimanikidze kuti iwe uise mari yako mumusika wekutengesa. Hongu kwete, nekuti iwe une dzakasiyana siyana nzira. Zvese zvakasikwa uye izvo zvinokodzera zvako chaicho zvido semudiki uye wepakati investor iwe zvauri. Kwete chete kubva kuequities. Asi zvakare yeyakagadziriswa, kwaunogona kunyorera nguva yekuisa mari, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi anobhadhara zvakanyanya. Iko njodzi ichadzikira zvakanyanya uye uchave uine yakatarwa uye yakavimbiswa chiyero chemari gore rega. Kusvika padanho rekuti inogona kunge iri mhinduro yakanakisa yekuzadzisa zvaunoda kubva zvino zvichienda mberi.
Kukanganisa kwechinomwe: kuva nemakaro kwazvo
Sezvazvakaitika kwauri kwauri kanopfuura kamwechete chiitiko, makaro anogona kutungamira kune inopfuura rimwe dambudziko muhukama hwakagara hwakaomarara nenyika yemari. Iwe unofanirwa kuziva panguva ipi yaunofanirwa kugadzirisa zvinzvimbo. Kunyangwe ichi chiito chichireva kuti iwe unogona kurasikirwa nechikamu cheiyo yekusimudzira chikamu chechengetedzo kana mari yemari. Zvirinani kuziva kuti ungabvisa sei munguva kuti iwe ugone kubata mhedzisiro yedonthrend iyo ichabvisa zvese zviwanikwa zvakagadzirwa kusvika panguva iyoyo. Kunyangwe uine mukana wekukusiira iwe ma euro mazhinji munzira. Zvese izvi zvisineyi nezwi rekuti kune ako ekudyara anotungamirwa: mapfupi, epakati kana akareba. Zvichangogara zvirinani kuunza imwe mari kuaccount account yako pane kusiya chikamu chemipiro yako yemari. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi.
Kanganiso yechisere: kusaziva kukosha
Uku kukanganisa uko kunyange nevatengesi vane ruzivo kwazvo mumisika yezvemari vane. Kusaziva chaizvo kwavanodyara mari yavo. Kwete kunyange mitsara yebhizinesi yemakambani akasarudzwa. Nemhedzisiro ine njodzi pamhedzisiro yekushanda muzviitiko zvakawanda. Iwe haugone kupomera chero munhu kukanganisa kwako kwakakomba, asi kungoita kushomeka kwechido pauri. Uye izvo zvinogona kukutungamira iwe kune asingadiwe mamiriro. Izvi ndizvo zviito zvakajairika muvashambadzi vanofungidzira vanoedza kuita mari yavo kuchengetedza munguva pfupi kwazvo yenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Maitiro ekudzivirira zvikanganiso zvegore rapfuura?
Dash, mukati memakumi gumi emari yedhijitari